Jamaica Michato: Yepedyo, Inoshamisa uye isingakanganwiki
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Jamaica Michato: Yepedyo, Inoshamisa uye isingakanganwiki
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vakaroorana kutenderera pasirese varikufungidzira marongero emuchato munzvimbo ino nyowani uye pavanenge vachisarudza madiki, mhemberero dzepedyo, chishuwo chavo chenzvimbo inoshamisa uye isingakanganwike yezuva guru inoramba yakadaro. Iine miganho yeJamaica ikozvino yakavhurika kune vafambi vekunze uye yakazara seti yehutano nekuchengetedza zvirongwa zviripo, vafambi vachirota nzvimbo yakanaka yekuenda kunosunga mapfundo havafanirwe kutarisa kumberi kwemahombekombe epachitsuwa, mapopoma emvura, dzimba dzepasi rese, uye inozivikanwa kugamuchira vaeni zvakanaka.
"Sekufambiswa kwemuchato uye kuenda kumuchato kuCaribbean, tinofara kugamuchira zvakanaka vakaroorana kuJamaica kunopemberera zuva ravo guru," anodaro Donovan White, Director weJamaica weVashanyi. “Pamusoro pezviitiko zvedu zvemhando dzakasiyana dzemhemberero, isu tine runyorwa rwevanochata nevevachangobva kuchata pachitsuwa chiripo chevachati vedu nezvikomba. "Nemitemo yakasimba iripo panzvimbo dzatinogara uye dzinofadza, nzvimbo yacho inoramba iri sarudzo yepamusoro kune vakaroorana pasi rose."
Pazasi pane kutenderedzwa kwazvino nhau dzemuchato nezvipiriso kune mamwe eJamaica anodakadza zvivakwa.
Marsha-Ann Brown Donaldson, Director weRomance paSandals Resort nguva pfupi yadarika akagovana kuti "Rudo harumiswe" nekuvhurwa kwakadzokororwa kweSandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean, uye Sandals Negril & Beaches Negril zvivakwa. Kubva kuvhurwa muna Chikumi, maSandals akagadzira michato makumi mashanu neshanu munzvimbo dzayo sevakaroora vachitsvaga mhemberero dziri kure uye dzepedyo. Pane zvese zvivakwa, iro remuchato wevaeni kugona rakatemwa ne55% kuona kuchengetedzwa kwevose vafambi. Maprotocol akati wandei ekuchengetedza ekuvandudza chiitiko chemuchato panguva yeCOVID-50 akaitwa kusanganisira: 18 Kubata Nzvimbo Yehutsanana dzidzira pane zvese zvivakwa, chaiwo pre-kuronga zvikamu zvekubatsira mukufambiswa kwemuchato, buffets dzinochinjirwa kumamenyu epa la carte, uye kuregedza kwemuviri panguva yemhemberero yemuchato uye pre-yemuchato zviitiko. Vakaroorana vanogona zvakare kutarisira kuzarurwazve kweSandals South Coast muna Gumiguru 1, 2020. Imba yacho yakagadziridzwa yemamirioni-emadhora iyo inosanganisira kuwedzera kwenzvimbo nyowani yemuchato panzvimbo yemahotera eItaly Village bapiro, makumi maviri nyika yekutanga-yeSwim-up Rondoval ™ Suites, uye yakagadziridzwa Dutch Village Suites. Iwo akagadziridzwa masuti ave kubvuma kuchengeterwa kwevanosvika kutanga Zvita 20, 10.
Nzvimbo inoshamisa muOcho Rios yemuchato wekuenda kana kuvandudzwa kwemhiko, Jamaica Inn inopa maonero asingaenzaniswi egungwa rinopenya reCaribbean uye makomo makuru eJamaica. Kubva kuvhurwa kwenzvimbo, iyo yakasarudzika pfuma yakaunza nhanho nyowani yekuchengeteka uye hutsanana kune vakaroorana, vaenzi vemuchato nevashandi zvakafanana. Iyo chivakwa inoda makumi mashanu-munhu anokwana kugona kwezviitiko, akavharirwa vashandi uye tembiricha cheki, pakati pezvimwe zviyero. Mukuenderana nezvinodiwa nevafambi, chivakwa chinopa zvakatowanda zvakajairwa masevhisi ekupa kune vakaroora vanoda diki, yakasarudzika mhemberero nerubatsiro rwewe-saiti Muchato Nyanzvi. Jamaica Inn ikozvino iri kupa 50% dhisikaundi pane emuchato mapakeji uye yakasarudzika boka reti penzvimbo dzekugara dzevaenzi vemuchato.
GoldenEye Resort yanga iri nhoroondo yegore ra1950 kubva pakunyora kwaJames Bond munyori Ian Fleming akatanga kuvaka dzimba dzakakora mutaundi reOracabessa kuJamaica kuNorth coast. Ichowo chisarudzo chekutanga pamhemberero diki dzemuchato dzakavanzika dzinogarisa vanosvika gumi vashanyi. Vakaroorana vanogona zvakare kusarudza kubva kune dzakasiyana dzimwe sarudzo dzakavanzika kusanganisira nzvimbo paPachivande Fleming Beach uye Sunken Bindu, nzvimbo yega yega inogara kusvika kune vashanyi makumi matatu. Maprotocol anoitwa panzvimbo yacho yemhemberero dzemuchato anosanganisira kuiswa kwenzvimbo dzekuchenesa maoko dzakatenderedza chivakwa, zvimiro zvemaski kune vese vashandi, uye yakaoma, yekuchenesa mazuva ese kwenzvimbo dzese, pakati pemamwe marongero matsva.
Mumwoyo weJamaica yeSouth Coast, Jakes Hotel paTreasure Beach iri boho-chic boutique hotera ine mavara ane makamuri uye bungalows ane maonero egungwa. Jakes anozvishingisa pakuve akatendeseka Jamaican nekumisikidza epedyo mhemberero yemuchato yevakaroora pane yakasarudzika Treasure pamhenderekedzo, kana mune gazebo yakatarisa kumahombekombe. Honeymoon kugara kunowanzo wedzera kuwedzerwa mumuchato mapakeji kuJakes, nevakaroorana vari kusarudza kuwedzera yavo yemuchato kutiza mumahombekombe egungwa mabungalows akazara nemasaji kuDriftwood Spa. Kubva kuvhurwa muna Chikunguru, Jakes akaita zvirongwa zvehutano pamwe nekuchengetedza zvinosanganisira maski anodikanwa kune vese vashandi, cheki tembiricha yevashandi nevashanyi uye zviteshi zvema sanitizer zvakaiswa zvakapoteredza chivakwa.
Kubva pane yakasarudzika pamhenderekedzo yegungwa kuenda kumhemberero dzakanangana neakasvibira, anonaya mvura masango, vakaroora vanosarudza Jamaica senge yavo yekuroora kwavanosarudza vanonakidzwa nezviyeuchidzo zvisingakanganwike kwemakore anotevera.
Kuti uwane zvimwe nezve yemuchato weJamaica uye zvipo zvehusiku, shanya www.visitjamaica.com/weddings-and-honeymoons/